လူမှုရှုခင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 111
ဗုဒ္ဓေါဝါဒဆရာတော် (ကင်တက်ကီ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူဝိ၀္စဘေးမြို့ရောက်လာတာကို မြန်မာပြည်သားအာလုံးက ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ကင်တက်ကီပြည်နယ်နှင့် ထိစပ်နေသည့် ဟိုရိုင်းရိုး၊ အင်ဓိ ယားနား၊ ထင်နက်စီနှင့် ကာရိုလိုင်းန တက်ဆတ်စ်ပြည်နယ်တွေ ကပါ လာရောက်ကြိုဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခရီးစဉ်မှာ လက်မှတ်နှင့် နေရာအခက်ခဲပြဿနာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိကြပေမဲ့ ကင်တက်ကီခရီးစဉ်ကတော့ မထင်မှတ်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကို မြန်မာပြည်သား တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လာရောက်နေထိုင်တာမှန်ပေမဲ့ ကင်တက်ကီပြည်နယ်ကတော့ လူဖြူကြီးဆိုတဲ့ နေရာဖြစ်သလို ရေပက်ဖလင်ကန်ပါတီ အများစုနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို. လူဝိ၀္စဘေးမြို့ မက်စ်မက်ကောနားရုံးကနေ ကရင်ဒုက္ခသည်တွက် ခရစ်စမ်ဟဲစ်ချပ်ကျောင်းကို ၀င်ခွင့် လက်မှတ် (၁၄၀) ပေးခဲ့တယ်။ ချပ်ကျောင်းမတက်တဲ့ မြန်မာပြည်သားများ မွန် ရခိုင် ရှမ်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ အချိန်အပြောင်းအလဲ နှင့် လမ်းညွှန်ထုတ်ပြန်ခြင်း နေ့စွဲ – ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် 2335 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94118 ရှိ University of San Francisco – War Memorial Gym ၌ ကျင်းပမည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆန်ဖရန်စစ္စကို (ဘေးဧရိယာ) မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချိန်ပြောင်းလဲထားပါသည်။ အခမ်းအနား ကျင်းပချိန်မှာ နံနက် ၉း၁၅ နာရီမှ ၁၀း၄၅ နာရီအထိ ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကျင်းပရာ ခန်းမကို နံနက်...
ရွှေဆည်သား (မိုးမခပေးစာ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ MOU ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အရ ချုပ်ဆိုသောစာချုပ်ဟု သိထားပါတယ်။ မြ၀တီကိုရောက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအနှံ့က လူငယ် ကျားမ စုံလို့ပါဘဲ။ အရမ်းကိုစည်ကားနေတာပါ။ ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ MOU တွေပါလို့ ပြောပါတယ်။ ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ပြီး ထိုင်းကိုသွားမလို့ဟုပြောပါတယ်။ ဒီတော့ နှစ်နိုင်ငံ နာလည်မှုစာချုပ်ကနေ ဘယ်ကကုမ္ပဏီနဲ့ ထိုင်းကို သွားအလုပ်လုပ်ရမှာလည်း လို့တွေးမိ့ပါရဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ မြ၀တီမှာ တာဝန်နဲ့ရောက်နေတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ သူမိတ်ဆွေ MOU တစ် ယောက်ကို စိတ်ဝင်တစ်စားမေးကြည့်လိုက်တော့ . . . မြ၀တီမှာ မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့က လူတွေဟာ သူတို့နေရပ်တွေမှရှိတဲ့ အေးဂျင့်တွေကနေတစ်ဆင့် ဒီကိုရောက် လာကြတာလို့သိရတယ် လေ။...
မိုးမခပေးစာ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်မှာ မိမိကိုယ်ပိုင်ကားများကို ထုခွဲရောင်းချကာ ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်နေသော ကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ယောက်အ ကြောင်းကတော့ နဲနဲဆန်းမည်ဟုထင်ပါသည်။ အထက (၂) ကမာရွတ်၊ ရန်ကုန်ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်မေလှရီသည် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ကျောင်းသားမိဘများကို တစ်ရက်လျှင် တစ်တန်းစီ အစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီး ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးလျှင် အနည်းဆုံး ငွေကျပ် တစ်သိန်းစီ ထည့်ဝင်ရန် အတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေပါသဖြင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော ကျောင်းသားမိဘများအတွက် အခက်ကြုံနေရပါ သည်။ ကျောင်းသားမိဘများ အတင်းအကျပ်ဖြည့်စွက်ရသည့်ဖောင် အစည်းအဝေးမတက်ရောက်သော မိဘများကိုလည်း နောက်တစ်နေ့ ကျောင်း လွှတ်ချိန်တွင် ကျောင်းသားငယ်များနှင့် အလှူခံပုံစံ ဖြည့် စွက်စေပါသည်။ ငွေတစ်သိန်းလှူမည်ဟု ကတိပြုစေပြီး အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။ MRTV 4...
Fort Wayne Invitation to SUU Event No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ (လက်ခံရရှိသော ဖိတ်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ နှစ်ပတ်လည် ( ၅ )နှစ်မြောက် အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ အစီအစဉ် ကျင်းပမည့်နေ့ရက် – ၁၈- ၉- ၂၀၁၂ (အင်္ဂါနေ့) ကျင်းပမည့်အချိန် – နံနက် (၁၁း၀၀)နာရီမှ နေ့လည် (၂း၀၀)နာရီထိ။ ကျင်းပမည့်နေရာ – ငွေကြာရံပရိယတ္တိစာသင်တိုက် (တောင်ဥက္ကလာပ)။ အခမ်းအနားကို နေ့လည် (၁၂)နာရီတွင် စတင်ပါမည်။နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား (၂၀၀၇ – ၂၀၁၂) ဖိတ်ကြားလွှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်- ၁ )-ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး။ ၂ )-နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံးလွှတ်ပေးရေး။ ၃...
သိန်း ၃၀၀ နှင့် ဥပဒေခေါင်းပေါ်တက်ထိုင်နေသူ တဦးအကြောင်း တရားရုံးသတင်းထောက်တဦး၊ ပေးစာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ (၁) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို အောင်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ နေ့ရက် ။ ။ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ စနေနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အချိန် ။ ။ နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ် မှ ၁၂ နာရီ အထိ နေရာ ။ ။ Colden Center for the Performing Arts, Queens College 65-30 Kissena Blvd, NY 11367 (၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နယူးယောက် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန်အတွက် လက်မှတ်များ ကြိုတင်ရယူရန် မလိုအပ်ပါ။ (၃) ဦးရာလူစံနစ်ဖြင့်...
သက်ဆိုင်သူလေသိပါစေတော့ အရှင်သြသဓ (ဓမ္မာနန္ဒဝိဟာရ)၊ စက်တင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂ ဆွမ်းမစားခင် နံနက်တိုင်း ဆွမ်းတော်ကပ်လှူခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း နံနက်မှာ ဆွမ်းတော်ပွဲလေး ယူလာ တော့ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ စာရွက်ပြာပြာလေးတစ်ရွက် တွေ့ပါတယ်။ မနေ့က(သြဂုတ် ၂၆-ရက်နေ့က) စာရေးသူတို့ ဓမ္မာနန္ဒကျောင်း နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲမှာ လိုက်ဝေနေတဲ့ လက်ကမ်းစာရွက်ကလေးပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က ဘုရားဝတ်ပြုရင်း အပြန်မှာ မေ့သွားတာနဲ့ တူပါတယ်လို့ ဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်စရာလေး ဆက်လုပ်နေလိုက်မိပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်တော့ ခါတိုင်းလို ဆွမ်းတော်တင်ပြီးပြီးချင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ဦးမချဖြစ်သေးပါဘူး။ ကြည်လင်အေးမြ တော်မူလှတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ မျက်နှာတော်ကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ဖူးနေမိပါတယ်။ ဘုရားရှင်ရဲ့ အငြိမ်းဓာတ်ဟာ မိမိစိတ်ထဲ ကိုပါ ကူးစက်ပြီး ရောက်လာသလို ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။ ကိလေသာ အညစ်အကြေး...
Page 111 of 130«1...109110111112113...130»